ट्रेन्डिङमा ‘मार्बल स्टुडियो’, कस्तो छ ? हेर्नुस (ट्रेलर)
कलाखवर सम्वाददाता, श्रावण २४ – चर्चित हलीउड चलचित्र ‘मार्बल स्टुडियो’ यान्ट-म्यान एंड द वास्प को आधिकारिक ट्रेलर सार्बजनिक भएको छ । सार्बजनिक भएको दुई दिनमामा नै ट्रेलरले दर्शकको राम्रो साथ पाउदै १ करोड भन्दा माथि भियुज प्राप्त गरिसकेको छ । नेपालमा समेत युटुब ट्रेन्डिङ ४५ मा ट्रेलर रहेको छ । फिल्म जुलाई ६ मा प्रदर्शनमा आउदै छ । हेर्नुस ट्रेलर :
कलाखवर सम्वाददाता, श्रावण २४ – विश्वभरमा लोक प्रिय पप स्टार जस्टिन बीवरले इन्गेजमेन्ट गरेका छन्। उनले अमेरिकी मोडल सँग हाइली बोल्डविनसँग इन्गेजमेन्ट गरेका हुन्। २४ बर्षीय स्टार बिबरले इन्स्टाग्राममा लामो संदेश सहित दुवैको फोटो पोस्ट गर्दै आफुले इन्गेजमेन्ट गरेको खुलाशा गरेका हुन्। संचारमाध्यमका अनुसार उनले बहामासमा रहेको एक रिसोर्टमा मोडल बोल्डविनलाई विवाहका लागि प्रपोज गरेका थिए ।बिबरका सुरक्षागार्डले बिबर बोल्डविनलाई विवाहका लागि प्रस्ताव गर्नुअघि रेस्टुरेन्टका स्टाफसँग उनीहरुका मोबाइल फोन...
२५ लाख खर्चेर करिश्मलाई नेपाल ल्याइयो
कलाखबर संवाददाता,२४, बैशाख–काठमाण्डौ । बलिउड अभिनेत्री करिश्मा कपूर नेपाल आएकी छिन् । उनी सोमवार बिहान ८ः३० मा नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेकी हुन् ।उनले दिउँसो राजधानीको दरबारमार्गमा रहेको मेरिगोल्ड सयपत्री ज्वेलर्सको उद्घाटन गर्दैछन् । उनी यसैका लागि मुम्बईबाट नेपाल आएकी हुन् । अभिनेत्री करिश्मा यसअघि पनि एक पटक नेपाल आएकी थिइन् । सोमवार साँझ स्वदेश फर्किन लागेकी उनलाई नेपाली २५ लाख रुपैयाँमा नेपाल ल्याइएको बुझिएको छ । उनी बलिउड...
विपासा वसु कलाखबर संवाददाता,२३,बैशाख–काठमाण्डौ । आफो सुदर साथै कामुक देखिनको लागि नायिकाहरुले विभिन्न तरिका अपनाउने गर्छन्। आफ्नो फेसमाप्लास्टिक सर्जरी गर्ने देखि लिएर स्तन सर्जरी सम्म गर्ने गर्छन् नायिकाहरु। बलिउडमा पनि आफ्नो स्तन सर्जरी गरेर ठुलो अथवा सानो बनाउने चलन रही आएको छ। आफ्नो फरक लुक्स साथै आफुमा सुन्दरता थपियोस भन्ने मनसायले नायिकाहरु स्तन सर्जरी गरेर ठुलो बनाउने गरेको समाचार बाहिर आउने गरेकै हो। आज हामी पाँच बलिउड नायिकाका बारेमा...
विश्वका १० प्रतिबन्धित फिल्म
कलाखवर सम्वाददाता, बैसाख १ – फिल्म र विवादको नाता धेरै पुरानो हो। फिल्ममा समाविष्ट दृश्यका मध्यनजर थुप्रै पटक विभिन्न फिल्महरू विभिन्न समयमा कयौं देशमा प्रतिबन्धित हुन पुगेका छन्। यस्ता फिल्महरूको सुचि लामै छ। यस्तो सुचिमा परेका १० फिल्महरू यस्ता छन्स् १. शालो ९द १२० डेज अफ सोडोम०स् सन् १९७५(७६ मा रिलिज भएको इटालिया(फेन्च फिल्म त्यसमा समाविष्ट नग्नता, योन दृश्य तथा अत्याधिक हिंसाका कारण प्रतिबन्धमा परेको थियो। २. क्यानिबल होलोकास्टस्...
शल्यक्रियापछि घर फर्किए आर्नोल्ड
कलाखवर सम्वाददाता, बैसाख १ -हलिउड अभिनेता आर्नोल्ड स्वाजनेगर मुटुको शल्यक्रिया पश्चात घर फर्किएका छन्। मुटुमा समस्या देखिएपछि उनको मुटुको शल्यक्रिया गरिएको हो।७० वर्षिया हलिउड सुपरस्टारको मुटुको भल्ब फेरिएको हो। उनको मुटुमा सन् १९९७ मा पहिलोपटक भल्ब राखिएको थियो र सो भल्बको समयावधि सकिएकाले सोको ठाउँमा नयाँ भल्ब फेरिएको हो। उनका प्रवक्ताले शल्यक्रिया सफल भएको र आशातितरूपमा स्वास्थ्यलाभ भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
“प्रदेशीको जिन्दगी” नयाँ फिल्म बन्दै, कमलादी स्थित आईतबार मुर्हत सम्पन्न
काठमाण्डौ,३०–पौष,राजकुमार राई बिचारपाटी मिडिया प्रा.ली.को प्रस्तुतिमा नेपाली कथानक चलचित्र परदेशीको जिन्दगी नयाँ मुभि आउने भएको छ । विभिन्न व्यापार व्यावसायबाट उक्लिदै, कलाकारिता जगतमा आफ्नो पाईला चुम्न सफल,निर्माता राजन गुरुङको लगानीमा उक्त चलचित्र निर्मान हुने भएको छ । एसएसपी पूर्ण चन जोशीको प्रमुख आतिथ्यमा निर्देशक विचल किराँतीले नरीवल फुटाएर कमलादी स्थित गणेश मन्दिरमा शुभ मुहुर्त सम्पन्न गरिएको छ । चलचित्र मा सुरेन्द्र मल्ल र रेशम सुनारले सहायक निर्देशन गर्दै छन...
कलाखवर सम्वादाता,काठमान्डौँ चलचित्र विकास बोर्डले नाममै आपत्ती जनाएपछि विवादमा तानिएको फिल्म ‘गाँजा बाजा’को प्रदर्शन मितिसँगै पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । निर्माण कम्पनी डिआर फिल्मस् बाट जारी विज्ञप्तीमा फिल्म फागुन २५ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने उल्लेख छ । ह्याप्पी ह्याप्पी मुडु बोलको सार्वजनिक गीतमा निख एण्ड जटाको संगीत र जटावेदा बेनर्जीको स्वर छ । यो गीत सामान्य चलनचल्तीका गीतभन्दा फरकशैलीको छ । २ यूवाको कथालाई यसमा देखाइएको छ । गणेशदेव...
धुर्मुस सुन्तलीले ल्याएको रोमान्टिक प्रेमगीतले रौनग्ता छाउदै ,भिडियोसहित
काठमाण्डौ,१५–मंसिर,राजकुमार राई । नेपाली हाँस्यब्यङ्ग्य क्षेत्रका कलाकार तथा सामाजिक अभियान्ता धुर्मुस सुन्तलीले दशौं वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरेको अवसरमा एक गीत सार्बजनिक गरेका छन् ।धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गरिरहेको एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्तीमा काम गरिरहेका कामदारहरु सँगैं एनिभर्सरी मनाउँदै उक्त गीत सार्बजनिक गरेका हुन्।धुर्मुस सुन्तली २०६५ मंसीर १४ गते बैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरेका थिए । मंसीर ४ गते आफ्नो दशौं एनिभर्सरीको अवसरमा धुर्मुस सुन्तलीले ‘म जुन दिन...